२३ असार, काठमाडाैँ । ग्लोबल आइएमई बैंकले कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सुदुरपश्चिम प्रदेश सरकारलाई नगद रु. २० लाख सहयोग गरेको छ । एक कार्यक्रमकाबीच बैंकको सुदुरपश्चिम प्रादेशिक कार्यालय प्रमुख
२३ असार, काठमाडाैँ । नेपाल एसबिआई बैंकले २७औं बार्षिकोत्सव मनाएको छ। उक्त अवसरमा बैंकले आफ्नो संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत निर्माण गरेको पशुपतिनाथ कलात्मक दक्षिणद्वार पशुपति क्षेत्र विकास कोषलाई हस्तान्तरण गरेको
नेप्से परिसूचक ३७ अंकले बढ्यो, कारोबार भएका १२ वटै उपसमूह सकारात्मक
२३ असार, काठमाडौँ । धितोपत्र बजारमा शेयर कारोबार मापक नेप्से परिसूचक आज पनि दोहोरो अङ्कले वृद्धि भएको छ । लगातार उकालो लाग्दै आएको बजारमा कारोबार मापक नेप्से परिसूचक ३७.९३ विन्दुले
२२ असार, काठमाडौँ । धितोपत्र बजारमा शेयर कारोबार माापक नेप्से परिसूचक आज दोहोरो अङ्कले बढेको छ । नेपाल स्टक एक्सचेञ्जका अनुसार कारोबार माापक नेप्से परिसूचक आज ३३.२७ बिन्दुले बढेर एक
फोर्स मोटर्सले ग्राहकले बैंक/फाइनान्समा तिर्नु पर्ने १ बर्षसम्मको किस्ता आफैँ तिरिदिने
२२ असार, काठमाडाैँ । नेपालका लागी फोर्स मोटर्सको आधिकारिक आयातकर्ता तथा बितरक आयाम इन्टरकन्टिनेन्टल प्रा. लि.ले कोरोना महामारीका बेलास्थिति सहज बनाउनका लागी आफ्ना ग्राहकहरुका लागी बृहत प्याकेज योजना ल्याएको छ
– हेमन्त केसी २२ असार, जाजरकोट । कूल ४१७ मेगावाट विद्युत् उत्पादनको लक्ष्य लिएको नलगाड जलविद्युत् आयोजनाको मुआब्जा वितरणको काम शुरु भएको छ । करिब ४६५ घर तथा तीन हजार
२१ असार, काठमाडौँ । नागरिक लगानी कोष र चन्द्रागिरि हिल्स लिमिटेडबीच स्थानीय बासिन्दा एवं सर्वसाधारणमा शेयर निष्कासन गर्नेसम्बन्धी सम्झौता भएको छ । चन्द्रागिरि हिल्सको १८ लाख ४० हजार नौ सय
एनआरएनएलाई आइएलओको ५ करोड बढी सहयोग
२१ असार, टेक्सस । अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठन (आइएलओ) सँग गैरआवासीय नेपाली सङ्घ (एनआरएनए) ले सहकार्य अघि बढाएको छ । आइएलओले गैरआवासीय नेपाली सङ्घलाई चार लाख २४ हजार ३१० अमेरिकी डलर
२० असार, काठमाडाैँ । एनआइसी एसिया लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडको साधारण शेयर आज बाँडफाँड भएको छ । सानिमा क्यापिटलले सर्वसाधारणमा बिक्री गरिएको शेयर बाँडफाँड गरेको हो । उक्त कम्पनीको शेयर
कोभिड –१९ को विश्वव्यापी महामारीका कारण शिथिल भएको नेपाली अर्थतन्त्र क्रमशः लयमा आउन थालेको अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडा बताउनुहुन्छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा खतिवडाले पछिल्ला सूचकबाट बन्दाबन्दीबाट प्रभावित
१९ असार, काठमाडाैँ । लकडाउनका कारण पर्यटन तथा हवाई क्षेत्रमा ३४ अर्ब बराबरको क्षति भएको एक अध्ययनले देखाएको छ । नेपाल पर्यटन बोर्ड र नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले गरेको अध्ययनले
१९ असार, काठमाडौँ । राष्ट्रिय व्यापार सङ्घले मौद्रिक नीतिमा व्यवसायीलाई बिना धितो कर्जाको व्यवस्था मिलाउन माग गरेको छ । सङ्घका महासचिव वैकुण्ठ दाहालले बिहीबार एक विज्ञप्ति जारी गरी कोभिड–१९ का